July 31, 2020 1263
प्रत्यक्ष दोहोरी मार्फत आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सफल लो’कदोहोरी गायि’का हुन् – टीका सानु । आँखा’मा आँखा जुधाएर जस्तालाई त्यस्तै दोहोरी सबाल जवाफ गर्न सक्ने क्षमता नै उनको प्रशंसाको बलि’यो पक्ष बन्यो । सामा’जिक संजालमा उनलाई रुचाउने समर्थकहरुको सङ्ख्या दिनानु दिन बढ्दो छ ।
युट्युबमा उनका दर्जनौं प्रत्यक्ष दोहोरीहरु सुन्न र हेर्न पाइन्छ । औपचारिक रुपमा रेकर्ड भएका गीत’हरुको सङ्ख्या पनि दर्जनौं पुगिसकेको छ ।
इन्द्रेणी कार्यक्रममा सहभागी भएर गरेका धेरै प’रोपकारी कार्यले उनलाई लोकप्रिय मात्र बनाएन कला’कारका साथै समाजसे:वीको रुपमा समेत स्थापित गरिदियो ।
उनको सरल जीवनशैली, दयालु मन, निस्वा’र्थी सोच र अरुको दुखमा आफु मर्मा’हत हुने जस्ता गुणहरुले नै उनी करौडौ दर्शक श्रोताको ढुकढुकी बन्न पुगेकी हुन् ।
इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत उनले आफ्नो गला’ र कलाको साहाराले राहत सङ्कलन गरी कैयौं रोगी, बिरामी, असहाय अनि दैबी प्रकोपमा परेका ब्यक्तिहरुलाई पुनर्जीवन दिने काम गरे”की छिन् ।
जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि मुस्कुरा:इरहने उनको बानीलाई इस्वरीय देन नै मान्न सकिन्छ । टिका सानुलाई केवल कलाकार मात्र भनेर सम्बोधन गरियो भने ‘सायद अन्याय पनि हुन सक्छ । उनी कलाकारका साथै एक सच्चा समाजसेवी पनि हुन् ।
त्यस्तै गायक राजु कुनै समय नेपाली लोकदो’होरीमा राजु परियारको ठूलै साम्राज्य थियो । तर, नाटकीय रुपमा उनको करिअर चम्किदाचम्किदै एकाएक निभ्यो ।
लोकपि्रयताको शिख’रबाट उनलाई कसैले फेदी’मा हुत्याएको होइन, आफैं चिप्लेका हुन् । लामो अन्तरालपछि फेरि आफूलाई ब्यूझाँउने प्रयत्न गर्दैछन् । फेरि उकालो उक्लिन खोज्दै’छन् । के राजू फेरि त्यो शिखर चुम्न सक्लान् त ?
राजुलाई आफ्नो जिन्दगी पहिले जुन लय’मा थियो आज पनि त्यही लयमा हिँडेको’जस्तो लाग्छ । त्यसो भए यो बीचमा उनी कहाँ बरालिएका थिए ? उनी दावी गर्छन्, ‘बीचमा रेस्ट लिएको हो । उत्कृष्ट गीतको खोजीमा देश-विदेशमा दौडने क्रममा यसो हुन ग’एको हो ।’
लामो समयको अन्तरालमा उनले गाएको ‘दरौं सि’रुबारी’ गीतले २०७२ मा सर्वोत्कृष्ट लोकगी’तको अवार्ड पायो । यही गीतले उनको पुनरागमनको ढोका खोलेको छ । उनकै रचना/स्वर र जयकुमार परिया’रको संगीत रहेको यो गीतलाई युट्युब’मा हेर्ने दर्शक बढिरहेका छन् ।
यही गीत’बाट उनी फूलमा भमरा, मौरी फूल’माथि, मिर्मिरेको घाम, लमजुङ जाने दाइ जस्ता गीतकै राजु परियार हुन् भनेर प्रमाणित गर्न कस्सिएका छन् । उनको पुनराग’मनले उनका आफन्त, शुभचिन्तक, लोक गीतप्रेमी हौंसिएका छन् । राजु पनि पुनः स्टुडियोदेखि स्टेजसम्म छाउने सुरसारमा छन् ।
राजुले अहिले’सम्म कति गीत रेकर्ड गरा’ए होला ? उनले गाएका थुप्रै गीत आ’फैले बिर्सिसकेका छन् । कतिपयले राजुलाई मात्रै गाउन ल’गाएर आˆनो नाम अगाडि राख्दै एल्बम निकाले’का छन् । कतिले त उनको स्वर राखेर नामै उल्ले’ख गरेका छैनन् । अब हेरौं उक्त दोहोरी भिडियो….
Prevयी युवतीलाई भेट्न पुगे भोजराज र भाग्य न्यौपाने (भिडियो सहित)
Nextएउटै अस्पतालका २८ जनामा संक्रमण
‘माधव नेपालको चुनाव चिन्ह हँसिया र मकैको घोगा’ – केपी शर्मा ओली
कोरियामा नेपाली मजदुरको भिसा अवधि थपियो
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136403)